बाँकेमा खै निषेधाज्ञा कार्यान्वयन भएको ? | Online Khoj Khabar
३० बैशाख २०७८, बिहीबार १९:१८
बाँके वैशाख ३० गते ।
बाँके कोरोनाको हटस्पट बनेको छ । दैनिक १० देखि १८ जनासम्म मानिसको मृत्यु भइरहहेको छ। उपचार नपाएर कतिपयले ज्यान गुमाइरहेका छन् । भाइरस संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न स्थानीय प्रशासनले तीन हप्तादेखि निरन्तर निषेधाज्ञा जारी गरिरहेको छ ।
तेस्रो पटक जेठ तीन गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको बाँके प्रशासनले जनाएको छ । तर संक्रमितको संख्या घटेको छैन्। मृत्युदरमा कमी आएको छैन्। कोरोना संक्रमणको सुरुवाती दिनमा लापरबाही गरेको प्रशासन र स्थानियले कोरोना संक्रमणको दर बढे संगै निषेधाज्ञा घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन्।
विहान साँझ तरकारी तथा खाद्यान्न किनमेलका लागि प्रशासनले केही समय छुट दिएको छ । तर त्यही मौकामा काम नपरे पनि स्थानिय घुमफिर गर्न निस्कने गरेका छन् । प्रहरी पनि मुड चले चेकजाँच गर्ने मुड नचले नगर्ने गरेको देखिन्छ । प्रशासनको झनै कुरै नगरौ उ हप्तामा एक चोटि सुचना जारी गर्छ, निषेधाज्ञा एकहप्ता थप्छ, अनि उ त्यही रातो सेतो घरमै हराउछ ।
अनि मेरो जिल्लामा दैनिक मर्नेहरुको संख्या बढ्दै जान्छ । बाँकेमा खै निषेधाज्ञा ? कति खुकुलो छ निषेत्राज्ञा ? किन कडा भएन निषेधाज्ञा ? भाइरस संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न निषेधाज्ञाको विकल्प थिएन् ।
तर अटेरी नागरिक, निकम्मा स्थानीय प्रहरी प्रशासनका कारण बाँकेमा निषेधाज्ञा पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । जस्का कारण संक्रमणको दरबढिरहेको छ । अवस्था थप जटिल र भयावह बनेको छ ।
जसपा यादव पक्षको कार्यकारिणी समिति बैठक बस्दै
काठमडौं असार ३ गते ।जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएका छन् । बैठकमा अर्का अध्यक्ष...
काठमाडौं असार ८ गते ।१६ औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा आज दुई खेलहरु हुँदैछन् । आजको खेलमा इंग्ल्यान्ड र चेक रिपब्लिक तथा...